သိချင်စိတ်များဟယ်ရီပေါ်တာ | eReaders အားလုံး
ဟယ်ရီပေါ်တာသည်အသက် ၂၀ တွင်ရှိပြီး၊ အချိန်ကာလ၏အကျော်ကြားဆုံး wizard နှင့် ပတ်သက်၍ သိချင်စိတ် ၂၀ ကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်
၁၉၉၇၊ ဇွန် ၂၆ ရက်နေ့တွင် JK Rowling သည် Harry Potter ၏ပထမဆုံး ၀ တ္ထုကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်အမည်ရ Harry Potter နှင့်အတွေးအခေါ်ပညာရှင်၏ကျောက်အလွန်မကြာမီတွင်အောင်မြင်မှုရခဲ့ပြီးယခုအသက် ၂၀ မပြည့်သေးပါ။ ကျန်တဲ့ဇာတ်လမ်းရဲ့ကျန်အပိုင်းတွေကိုစာအုပ်ဆိုင်၊ စာအုပ်တွေ၊ ရုပ်ရှင်တွေနဲ့အခြားအရာများစွာအတွက်စာအုပ်တွေထပ်မံဖြည့်စွက်ထားတာအပြင်စာအုပ်ဆိုင်ခြောက်ခုထပ်တိုးလာတာနဲ့အမျှအားလုံးနီးပါးကိုလူသိများပါတယ်။
ဗြိတိသျှစာရေးဆရာသည်ယခုအခါကမ္ဘာ့စာပေ၏အဓိကအပိုင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်လူငယ်စာပေအပြင်ဘက်တွင်သူမအောင်မြင်မှုများသည်များစွာအောင်မြင်မှုမရရှိခဲ့ပါ။ ယနေ့နှင့်အနှစ် ၂၀ အကြာတွင်ဟယ်ရီပေါ်တာသည်သူ၏ဖြုန်းတီးသောသားဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ သူသည်သူ့ကိုယူရိုသန်း ၄၅၀ ကျော်ရရှိခဲ့ပြီးအဆုံးသို့ရောက်ရန်လမ်းများစွာရှိသည်။ ဘယ်တော့မှလာမှာမဟုတ်ဘူး
အချိန်ကုန်လွန်ခြင်းနှင့်သမိုင်းတွင်အကြီးမားဆုံးသောစာပေဖြစ်စဉ်တစ်ခု၏မွေးနေ့ပွဲဆင်နွှဲရန်ကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်မည် အချိန်ကာလ၏အကျော်ကြားဆုံး magician နှင့်သူ့ပတ်လည်ရှိစကြဝuniverseာတစ်ခုလုံးနှင့် ပတ်သက်၍ သိချင်စိတ် ၂၀ ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စာဖတ်သူများကိုသာကန့်သတ်ထားရုံတင်မကဘဲ Rowling မှသူမ၏မှော်ကမ္ဘာနှင့်ပတ်သက်သည့်ရုပ်ရှင်နှင့်စာသားများနှင့် ပတ်သက်၍ သိလိုစိတ်ကိုလည်းပြောပြပါလိမ့်မည်။
1 အားလုံးအချိန်ကာလ၏အကောင်းဆုံးလူသိများ Magician အကြောင်းကို 20 သိချင်စိတ်
1.1 Harry Potter, JK Rowling နှင့် Daniel Radcliffe တို့သည်သူတို့၏မွေးနေ့သည်ထိုနေ့တွင်ပင်ဖြစ်သည်
1.2 အဆိုပါ Potters Rowling ရဲ့အိမ်နီးချင်းများဖြစ်ကြသည်
1.3 ပဉ္စလက်နှင့်မှော်အတတ်ကျောင်း ၁၁ ကျောင်းရှိသည်
1.4 Dumbledore နှင့်သူ၏လျှို့ဝှက်လိင်
1.5 Hermione သာ Ecstasy ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုရခဲ့တယ်
1.6 Voldemort ရဲ့အကြီးမားဆုံးသောကြောက်ရွံ့ခြင်း
1.7 Hogwarts လူတိုင်းအတွက်မျက်မှောက်ထဲကဖြစ်ပါတယ်
1.8 သင်က trolls ထဲကယူ!
1.9 Ginny Weasly သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Quidditch ကစားခဲ့သည်
1.10 နဂါးလူမျိုးစုစုပေါင်း ၁၀ ခုရှိသည်
1.12 Dumbledore ၏ရုံးမှလိမ်လည်မှု
1.13 Ron ရဲ့ဒုတိယဘဝ
1.15 Hogwarts ၏တိုက်ပွဲ
1.17 Teddy Lupine, မှော်ဆရာတစ်ယောက်ရဲ့နတ်သမီး
1.18 ပါမောက္ခ McGonagall ရဲ့ကြောင်ကြောက်တယ်
1.20 Snape အားဟယ်ရီပေါ်တာ၏အခွန်ဆက်
အားလုံးအချိန်ကာလ၏အကောင်းဆုံးလူသိများ Magician အကြောင်းကို 20 သိချင်စိတ်
ထို့နောက်ဟယ်ရီပေါ်တာနှင့်သူ၏စကြဝuniverseာတစ်ခုလုံးနှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိခဲ့သည်မှာသေချာသည်။
Harry Potter, JK Rowling နှင့် Daniel Radcliffe တို့သည်သူတို့၏မွေးနေ့သည်ထိုနေ့တွင်ပင်ဖြစ်သည်
JK Rowling နှင့် Harry Potter တို့၏မွေးနေ့သည်အတူတူဖြစ်သည်ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့တွင်၊ ၁၉၅၅ မှစာရေးဆရာနှင့် ၁၉၈၀ မှော်ဆရာတို့၏ဖြစ်ရပ်များတွင်ပါ ၀ င်သည်။ သိလိုစိတ်မှာနောက်ထပ်ဖြစ်သည်။ ဒယ်နီယယ်လ် Radcliffe၊ မတူကွဲပြားသောရုပ်ရှင်များတွင်ဟယ်ရီသရုပ်ဆောင်သည့်သူသည်သူ၏မွေးနေ့ကိုလည်းမွေးဖွားခဲ့သည်။ တူညီတဲ့နေ့က။
အဆိုပါ Potters Rowling ရဲ့အိမ်နီးချင်းများဖြစ်ကြသည်
Potter ၏နောက်ဆုံးအမည်ကိုအိမ်နီးချင်းများမှုတ်သွင်းသောဗြိတိသျှစာရေးဆရာမှရွေးချယ်ခဲ့သည်။ Potters သည်သူမကလေးဘဝတုန်းက Rowling နေထိုင်ရာကျော်လွန်သောအိမ်လေးအိမ်တွင်နေထိုင်သောမိသားစုဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ယခုအချိန်တွင်နှင့်ဤမျှကာလပတ်လုံးသူ့အိမ်နီးချင်းများသည်လုံးဝဘာမှမပြောခဲ့ကြပါ၊ ထို့အပြင်ရိုလင်းသည်သူ၏နာမည်ကိုအချိန်တိုင်းအကျော်ကြားဆုံးမှော်ဆရာထံတင်ပြရန်သူတို့ကိုယ်သူတို့ထင်နေပုံရသည်။
ပဉ္စလက်နှင့်မှော်အတတ်ကျောင်း ၁၁ ကျောင်းရှိသည်
Hogwarts သည်လူသိများသောမှော်နှင့်ဝိဇ္ဇာအတတ်ဆုံးသောကျောင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်တစ်ခုတည်းသောကျောင်းမဟုတ်ပါ။ စုစုပေါင်းကမ္ဘာအနှံ့မှော်အတတ်ကျောင်း ၁၁ ကျောင်းရှိသည်။ ငါတို့သိသောစာအုပ်များတွင်ဖတ်ရှုနိုင်သကဲ့သို့ Hogwarts စကော့တလန်တွင်တည်ရှိသည်, Beauxbatons များ ပြင်သစ်မှာ, ရေနံချောင်း ဂျာမနီမှာ, Ouagadouအာဖရိကရှိလ၏တောင်များ၊ မဟာoutoroဂျပန်ရှိမီးတောင်ကျွန်းတစ်ကျွန်းနှင့် .ရာဝတီ, United States မှာတည်ရှိပါတယ်။ သူတို့၏အမည်များနှင့်ကျန်ကျောင်းများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလည်းမသိရသေးပါ။
Hogwarts ၏ဒါရိုက်တာဖြစ်သူ Dumbledore ၏လိင်မှုအကြောင်းကိုမည်သည့်အခါကမျှဖော်ပြခဲ့ခြင်းမရှိပေ။ စာရေးသူသည် Dumbledore ၏လိင်အကြောင်းပြောဆိုရန်လိုအပ်သည်ဟုမယူဆခဲ့သော်လည်းသူမသည်လိင်တူချစ်သူဖြစ်ကြောင်းအမြဲတမ်းထင်ရှားသည်။
Hermione သာ Ecstasy ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုရခဲ့တယ်
Hermione သည်သူမ၏စွမ်းရည်နှင့်သန္နိof္ဌာန်ကိုပြသသည့်အနေဖြင့်သူမသည်လေ့လာမှုများပြီးဆုံးရန်နှင့် Hogwarts သို့ပြန်သွားခဲ့သည် Ecstasy ခေါင်းစဉ်။ ဟယ်ရီနှင့်ရွန်တို့သည်သူတို့၏ဖြစ်ရပ်များကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့အတွက်အသုံးမ ၀ င်ခဲ့သော်လည်း၎င်းသည်သူတို့လိုချင်သောခေါင်းစဉ်မရရှိဘဲဆက်နေခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
Voldemort ၏ရှေ့မှောက်တွင်ရှိသော boggart သည်သူ၏အလောင်းသို့အသွင်ပြောင်းသွားလိမ့်မည်။ အမှောင်ဖုံးအုပ်သောအရှင်သည်အကြောက်ရဆုံးမှာသူ့သေခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုမည်သူကစာပေတွင်အဆိုးဝါးဆုံးနှင့်မုန်းတီးဖွယ်သတ္တဝါတစ်ကောင်နှင့်ရင်ဆိုင်ရမည်နည်း။
Si တစ် ဦး muggle hogwarts တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်သူမမြင်နိုင်သောအရာတစ်ခုမှာရဲတိုက်နှင့်အထီးကျန်ဆန်သောနိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်လိမ့်မည်။ "အားလပ်ခွင့်ယူသည်! အပျက်အယွင်းများ "။ အခြားတစ်ဖက်တွင်သင်ကမှော်ဆရာတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးထိုအခိုက်အတန့်တိုင်သင်မသိရှိခဲ့လျှင်ထူးကဲကောင်းမွန်သောမှော်အတတ်နှင့်နတ်ဝိဇ္ဇာအတတ်ကိုသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။
သင်က trolls ထဲကယူ!
မည်သည့်ကျောင်းတွင်မဆိုသင်ရရှိနိုင်သောအဆိုးရွားဆုံးတန်းသည်သုည (သို့) တိုက်ရိုက်ကျရှုံးခြင်းဖြစ်သော်လည်း Hogwarts တွင်အရာရာသည်ကွဲပြားခြားနားပြီးသင်ရရှိနိုင်သောအဆိုးဆုံးတန်းမှာ Troll ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အကောင်းတစ် ဦး အတတ်သင်ဖြစ်ခြင်းမှဝေးကွာသည်ဟုဆိုလိုပါလိမ့်မည်။
Ginny Weasly သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Quidditch ကစားခဲ့သည်
Ginny Weasly ဟာကြီးမားတဲ့ Quidditch ကြယ်ပွင့်ဖြစ်သည်အောင်မြင်မှုရပြီးနောက်ဟယ်ရီပေါ်တာနှင့်မိသားစုစတင်ရန်အနားယူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သူမသည် Quidditch ၏ကျော်ကြားသော Daily Prophet သတင်းထောက်တစ် ဦး လည်းဖြစ်သည်။
နဂါးလူမျိုးစုစုပေါင်း ၁၀ ခုရှိသည်
ဟယ်ရီပေါ်တာစကြာ ၀ Inာတွင်နဂါးလူမျိုး ၁၀ မျိုးရှိသည်။ စာအုပ်များတွင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များမပါရှိသော်လည်း
ဟယ်ရီပေါ်တာ၏သားသမီးများ၏နာမည်အပြည့်အစုံမှာ; James Sirius၊ Albus Severus နှင့် Lily Luna ထိုအရာများထဲမှကျွန်ုပ်တို့သည်အချိန်ကုန်လွန်ခြင်းနှင့် JK Rowling ထုတ်ဝေသောစာပေအသစ်များနှင့်ပိုမိုအသေးစိတ်အချက်အလက်အချို့ကိုသေချာပေါက်သိနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတွေ့ခဲ့သည့်ရုပ်ရှင်တစ်ခုစီတိုင်းတွင် Dumbledore ၏ရုံးခန်း၌တွေ့ရသောစာအုပ်များမှာအမှန်တကယ်မဟုတ်ကြပါ။ ရုပ်ရှင်၏ရိုက်ကူးရေး ၀ န်ထမ်းများစွာ၏အဆိုအရ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့အားကျွန်ုပ်တို့စာအုပ်၏ရှုထောင့်ကိုဖော်ပြရန်အလောင်းများဖြင့်စီထားသည့်ဖုန်းစာအုပ်များသာဖြစ်သည်။ အားလုံးကြည့်
JK Rowling ၏စိတ်ပြောင်းလဲမှုကြောင့် Ron ၌ဘဝနှစ်မျိုးရှိသည် နှင့်စာရေးဆရာမသူမကိုယ်တိုင်အကြိမ်ကြိမ်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းသူမ Saga အလယ်၌ RON ၏ကောင်းကျိုးကိုသတ်တော့မည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။
ဟယ်ရီပေါ်တာ၏အလယ်အမည်မှာ James၊ Ron Bilius၊ Hermione Jane နှင့် Ginny Molly တို့ဖြစ်သည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည် Saga ၏ကွဲပြားခြားနားသောစာအုပ်တွေထဲမှာပေါ်လာပါသည်။
ဟယ်ရီပေါ်တာဘဝ၏အထင်ရှားဆုံးအထင်ကရတစ်ခုမှာ ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးသောစာအုပ်ထုတ်ဝေသည့်နှစ်တွင်ဖြစ်ပွားသော Bog of Hogwarts ဖြစ်သည်။ JK Rowling ကဒီထူးဆန်းတဲ့နေ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ခါမှမပြောခဲ့ပေမဲ့ဒီသီအိုရီတွေကတော့မတူကွဲပြားတယ်။
စာပေအရေးအသား၏နောက်ဆုံးစာအုပ်၏အဆုံးတွင် Voldemort ကိုအနိုင်ယူပြီးနောက်၊ Harry Potter သည် Parseltongue စကားပြောစွမ်းရည်ကိုရှုံးသည်။ ဤသည် wizard ငယ်သည်မှောင်မိုက်သောသခင်နှင့်မချိတ်ဆက်ထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
Teddy Lupine, မှော်ဆရာတစ်ယောက်ရဲ့နတ်သမီး
ဟယ်ရီပေါ်တာကသူ့ကလေးတွေကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ရုံသာမကဘဲ Teddy Lupine, Remus နှင့် Tonks တို့၏သားသူသည်အဖွား၏လက်အောက်တွင်ကြီးပြင်းခဲ့သော်လည်းများသောအားဖြင့်သူသည်ဟယ်ရီ မှလွဲ၍ သူ့ဖခင်၏အိမ်၌အိပ်ရာဝင်ခဲ့သည်။
ပါမောက္ခ McGonagall ရဲ့ကြောင်ကြောက်တယ်
တိရစ္ဆာန်များနှင့်ကလေးများသည်ရုပ်ရှင်အဖွဲ့များကိုအမြဲတမ်းဒုက္ခပေးလေ့ရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။ ဟယ်ရီပေါ်တာရုပ်ရှင်တစ်ခုတွင်ပါမောက္ခ McGonagall တီးခတ်နေသည့်ပြaနာရှိသည်။ ၎င်းသည်တစ်ကြိမ်တွင်ပျောက်ကွယ်သွားပြီး၎င်းတို့ကိုနောက်တစ်နည်းဖြင့်အစားထိုးရန်လိုအပ်သောကြောင့်၎င်းကိုထပ်မံရှာဖွေနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
လူအများမသိသောအရာတစ်ခုမှာထိုအရာသည်မဟုတ်ပါ Neville နှင့် Gilderoy Lockhart တို့၏မိဘများသည်မှော်အခြေအနေမှပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ပြီးတော့မှော်မှော်ကဘယ်သူမှမကုသနိုင်အောင်လုပ်တဲ့အရာတွေရှိပါတယ်။
Harry Potter သည် Snape နှင့်သူရဲကောင်းဝါဒကိုဘယ်သောအခါမျှမမေ့ခဲ့ပါ။ ဥပမာတစ်ခုမှာသူသည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းနှင့် Hogwarts ၏ကျောင်းအုပ်ကြီးကိုမှန်ကန်သောနေရာ၌ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းနှင့်သူဘယ်တော့မှပြောင်းရွှေ့ခြင်းမပြုသင့်သောသူ၏ပုံတူကိုအောင်မြင်စွာရရှိနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ပထမဆုံးဟယ်ရီပေါ်တာစာအုပ်သည်စာအုပ်ဆိုင်များသို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့သည်မှာနှစ် ၂၀ ရှိခဲ့ပြီး၊ နောက်ပိုင်းတွင်များစွာသောစာအုပ်များ၊ ရုပ်ရှင်အများအပြားနှင့်အခြားအရာများစွာစတင်သည့်အဖြစ်အပျက်များစွာဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ငါတို့က Potter စကြာ ၀ ofာအကြောင်းသိကောင်းစရာ ၂၀ လောက်ပဲပြောခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ 20 ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပိုရေတွက်နိုင်တယ်, ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးနောက်ထပ်အနှစ် ၂၀ လောက်ကြာအောင်စောင့်ကြပါစို့၊ အချိန်ကုန်ဆုံးလူကြိုက်အများဆုံးမှော်ဆရာဟာနာမည်ကြီးသလိုဆက်ရှိနေ ဦး မယ်။
ဟယ်ရီပေါ်တာနှင့်၎င်းဝန်းကျင်ရှိစကြဝuniverseာတစ်ခုလုံး၏ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စေသောသိချင်စိတ်ကိုသင်သိပါသလား။။ ဤ ၀ င်ရောက်မှုမှတ်ချက်များအတွက်သီးသန့်ထားသည့်နေရာ၊ ဖိုရမ်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိနေသည့်လူမှုကွန်ယက်တစ်ခုမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြပါ။ သင်ပြောသမျှအားလုံးကိုဖတ်ရန်စိတ်အားထက်သန်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » ယေဘုယျ » စာအုပ်များ » ဟယ်ရီပေါ်တာသည်အသက် ၂၀ တွင်ရှိပြီး၊ အချိန်ကာလ၏အကျော်ကြားဆုံး wizard နှင့် ပတ်သက်၍ သိချင်စိတ် ၂၀ ကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်
ငါ Harry Potter Saga ကိုချစ်တယ်ဆိုတာဝန်ခံပါတယ် တစ်နေ့ပြန်ဖတ်မယ်သေချာပါတယ် ထိုကဲ့သို့သောအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြရန်ရိုလင်း၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုသည်အထင်ကြီးစရာဖြစ်သည်။ ရုပ်ရှင်တွေကိုကျွန်တော်အရမ်းသဘောကျတယ်၊ ဒါပေမယ့်စာအုပ်တွေကရှင်းပြရတာပိုကောင်းတယ်၊
ဆောင်းပါးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါ (ဥပမာကျောင်းများ၏အမည်များကဲ့သို့) အရာများစွာကိုသတိရမမှတ်မိခဲ့ဝန်ခံရမယ်။
အမေဇုံက၎င်း၏ Kindle အချို့ကိုယူရို ၄၀ အထိလျှော့ချသည်
Kobo Aura H2O Edition2- Kobo ၏ Amazon သစ် Kindle ကိုတိုက်ခိုက်ရန်အတွက်လောင်းကြေးအသစ်